Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuNdasa 2017 » SciBraai
Shisa Sayensi- Isayensi yangeviki – 07 kuNdasa 2017
Sibusiso Biyela / March 7, 2017
Nazi ezihamba phambili ezeSayensi eNingizimu Afrikha kuleliviki. Shisa Sayensi!
Isilwane sasemandulo i-Euchambersia
Ubuthi besilwane sasemandulo
Cishe asikho isilwane esisatshwa siphinde sinyanywe njengenyoka. Kusukela ebhayibhelini kuze kubekhona nakwizinganekwane, inyoka isilwane esingathembekile futhi esiyingozi. Okukhulu okwenza abantu beyisabe inyoka ukuthi iyalumana, ishaya umuntu eqakaleni imufake ubuthi obunokufa.
Lokhu kuluma ngobuthi bekwaziwa kuyinto yayo inyoka kuphela kodwa ososayensi baseNyuvesi yaseWits bathole isilwane esasiphila emandulo, esesingasekho manje, esasinaleli khono lokulumana ngobuthi. Labososayensi bacabanga ukuthi lesisilwane, abasibize nge-Euchambersia, yiso esokuqala emhlabeni esabakhona esikwazi ukulumana ngobuthi.
Bakuthole lokhu ngokuthi babheke amathamba aso lesi silwane babona okusamgodi kwinhloko abacabanga ukuthi kulapho khona ubuthi babuhlala khona, njengazo izinyoka ezinobuthi eziphilayo manje.
Imihlaba emisha etholakele engu-7
Kutholakale imihlaba emisha eyisikhombisa
Umhlaba wethu ungowodwa kweyisishagalombili ezungeza ilanga, kodwa njengoba kwaziwa kahle, owethu kuphela umhlaba kulemihambi (planet) enempilo okungabalwa kuyo imvelo enezilwane, izihlahla kanye nabantu.
Ososayensi benhlangano yezasemkhathini, i-NASA, sebethole imihambi eyimihlaba abacabanga ukuthi icishi ifane nowethu umhlaba lona esikuwo. Lemihambi bayithole izungeza elinye ilanga eliyinkanyezi ekhanya ngobubomvu abayibiza nge-TRAPPIST-1.
Ososayensi basebenzise izipopolo bezibhekise emkhathini ukuyibona lemihambi ekude kakhulu ngokwebanga. Kungenzeka ukuthi lemihlaba ibe namanzi nezimo ezifanele imvelo enempilo.
i_Nokia 3310 entsha
Intandokazi yeselula i-3310 isibuyile
Labo bethu ababephila ngeminyaka kusukela ku-2000 bayazi ngomakhalekhukhwini i-Nokia 3310. Lentandokazi yocingo yayaziwa ngokuqina kwayo, amandla ahlala isikhathi eside kanye nokuhlala kwayo ingagugi kalula. Inkampani i-Nokia iyakwazi lokhu nokuthi wawuthandwa kangakanani lomakhakekhukhwini, ingakho sebewubuyisa ezitolo.
Kodwa sebewukhulisile ngokuthi benze i-screen sibe nemibala emingingi kuphinde kubekhona nekhamera ngaphezu kwakho konke abantu abakuthandayo, okungabalwa kukho ne-game i-Snake.
March 7, 2017 in #ShisaSayensi. Tags: Africa, isayensi, science, science zulu, Shisa Sayensi, south Africa, Zulu science
← [LISTEN] The Science Inside: Radio waves, lost continents and skirt lengths
LEGO tape is a South African product →